Iindaba -Ibuye njani ishishini lebhiya? Jonga inkqubela phambili yala mazwe
Ishicilele njani ishishini lebhiya? Jonga inkqubela phambili yala mazwe
Iibhari kunye neeresityu zivulwe zilandelelana, zidityaniswa nokubuyiselwa koqoqosho lwasebusuku kunye noqoqosho olukhulayo lwezitrato zasesitalatweni, imarike yebhiya yasekhaya ibonakalise umfutho wokuchacha. Ke, kuthekani ngoogxa bamanye amazwe? Indawo zokurhweba ngobugcisa zaseMelika ezazikade zixhalabile ngokungakwazi ukuphila, imivalo yaseYurophu ixhaswe ziivawutsha zokusela, kunye notywala. Ngaba balungile ngoku?
I-United Kingdom: Ibha iya kuvulwa nge-4 kaJulayi kwangoko
Unobhala waseBritane wezoRhwebo uSharma uthe ukuvulwa kweebhari kunye neeresityu "kwasekuqaleni" kuya kufuneka kulinde kude kube nguJulayi 4. Ngenxa yoko, ii-pubs zaseBritane zalo nyaka ziya kuvalwa ngaphezulu kweeyure zomsebenzi.
Nangona kunjalo, kwiiveki zamva nje, uninzi lweebhari e-UK zibonelela ngebhiya yokuthatha, eyaziwa kakhulu ngabaseli. Uninzi lwabathandi bebhiya bayonwabele ibhiya yokuqala ye-pub kwiinyanga ezitalatweni.
Iibhari kwamanye amazwe aseYurophu ziyavulwa kwakhona okanye malunga nokuvulwa kwakhona. Ngaphambili, iinkampani ezininzi zebhiya zazikhuthaza abathandi bebhiya ukuba bathenge iivawutsha kwangaphambili ukuze baxhase imivalo evaliweyo okwethutyana. Ngoku, xa le mivalo ingavulwa kwakhona, uninzi lweebhotile ezi-1 zeebhiya zasimahla okanye ezihlawulelweyo zilindele abaselayo ukuba bafike.
Ostreliya: Abarhwebi bewayini bacela ukunqunyanyiswa kwirhafu yotywala
Ngokwengxelo zosasazo lwangaphandle, ibhiya yase-Australia, iwayini kunye nabavelisi bomoya, iihotele kunye neeklabhu zidibene ngokudibeneyo kurhulumente womanyano ukumisa ukunyuswa kwerhafu yotywala.
UBrett Heffernan, umphathi olawulayo weAustralia Brewers Association, ukholelwa ekubeni eli asiloxesha lokunyusa irhafu yokusebenzisa. "Ukonyuka kwerhafu yotywala izakuba sesinye isibetho kubathengi nakubanini beebhari."
NgokweNkampani yeZiselo ezinxilisayo yase-Australia, ukuthengiswa kweziselo ezinxilisayo e-Australia kuye kwehla kakhulu ngenxa yefuthe lobhubhane wesithsaba. Ngo-Epreli, ukuthengiswa kwebhiya kwehle iipesenti ezingama-44 ngonyaka, kwaye ukuthengisa kwawa ngama-55% ngonyaka-ngonyaka. Ngomhla ka-Meyi, ukuthengiswa kwebhiya kwehle iipesenti ezingama-19 ngonyaka, kwaye ukuthengisa kwawa ngama-26% ngonyaka-ngonyaka.
I-United States: Iipesenti ezingama-80 zabenzi bezinto zobugcisa bafumana inkxaso-mali yePPP
Ngokwophando lwamva nje olwenziwe yiAmerican Brewers Association (BA) kwifuthe lobhubhane kubuchwephesha bezobugcisa, ngaphezulu kwe-80% yabenzi bezinto zobugcisa bathi bafumene inkxaso-mali ngeNkqubo yoKhuselo loMvuzo (PPP), ebenza bazithembe ngakumbi. malunga nekamva. ukuzithemba.
Esinye isizathu sokwanda kwethemba kukuba amazwe ase-US aqalise ukuvula ishishini, kwaye kwiindawo ezininzi, iindawo zotywala zidweliswe kuluhlu lwemisebenzi evunyelweyo ngaphambili.
Kodwa ukuthengisa kwabathengisi beebhiya abaninzi kwehlile, kwaye isiqingatha sabo sehle ngama-50% okanye nangaphezulu. Ukujongana nale mingeni, ukongeza ekufakeni isicelo semali mboleko yenkqubo yokuqinisekisa umvuzo, abavelisi beebhiya bakwanciphisa iindleko kangangoko kunokwenzeka.
Ixesha Post: Sep-05-2020